LG na -enye gam akporo Wear 2.0 egwuregwu Watch na ụdị nche Androidsis
con mwepụta nke gam akporo Wear 2.0Anyị na -echekwa mkpughe nke LG smartwatches ọhụrụ abụọ. Watch Style na Watch Sport na -achọ imeju mkpa abụọ dị iche iche maka ụdị ndị ọrụ abụọ n'ụzọ pụtara ìhè. N'ime ha abụọ, Watch Sport bụ ọkọlọtọ ma bụrụkwa nke kacha mkpa maka nkọwa na ọnụahịa.
Anyị makwa ugbu a, n'ụbọchị mmeghe ha, na elekere LG ọhụrụ ahụ nwere Google emetụtala n'ihe gbasara imewe, yana dị ka onye njikwa ngwaahịa Jeff Chang si kwuo, mmekorita a adịla mgbe ha rụkọrọ ọrụ na mmemme Nexus. Ọ bụkwa na LG ekwuputala elekere abụọ mara mma nke anyị hụrụ n'ọtụtụ nchapu n'ime izu ndị a gara aga. Ha abụọ nwere Android Wear 2.0 etinyere na mbụ wee malite na United States na February 10.
Elekere abụọ smart na, n'agbanyeghị na ha anaghị ebu akara Pixel ma ọ bụ Nexus, bụ ihe nkwado na -ebu Android Wear 2.0, ọmarịcha nwa agbọghọ Google ugbu a, nke na -egosipụta njirimara ha kachasị mma, n'agbanyeghị na ọ bụ Lelee egwuregwu nke nwere ezigbo akụrụngwa iji ohere nke ike ọhụrụ nke ikpo okwu ọhụrụ.
Anyị ga -ekwu okwu na LG Watch Sport na Watch Style atụmatụ tupu ikwu maka ha abụọ n'otu oge.
1 Nkọwapụta LG Watch Sport
2 Nkọwapụta LG Watch Style
Nkọwapụta LG Watch Sport
1,38 inch 480 x 480 P-OLED Gorilla Glass 3 ngosi
Ihe mgbawa Snapdragon Wear 2100 mechiri na 1.1 GHz
768 MB nke Ram
430 mAh batrị
Akụkụ: 45.4 x 51.21 x 15.5 mm
Eriri edoziri (nwere ngwaike)
Ahịa: $ 349
Nkọwapụta LG Watch Style
1,2 inch 360 x 360 P-OLED Gorilla Glass 3 ngosi
Snapdragon Wear 2100 mgbawa na 1.1 GHz
512 MB nke Ram
240 mAh batrị
Asambodo IP68 maka mgbochi mmiri / uzuzu
Akụkụ: 42.3 x 45.7 x 10.79 mm
Eriri akpụkpọ anụ 18mm
Ahịa: $ 249
Elekere abụọ na-abịa na P-OLED panel nke yiri elekere LG gara aga, nke na-enyere aka nlele ihuenyo ka mma na iche mgbe ìhè anyanwụ na -ada n'elu panel. A na-ejikwa njupụta pixel dị elu mara ha, n'agbanyeghị na ọ bụ LG Watch Sport na-ebute ụzọ na nke a na nnukwu 1,38-inch 480 x 480. N'ezie, ha abụọ nwere Gorilla Glass 3.
LG Watch Sport nwere ntakịrị RAM, yana 512MB maka Watch Style bụ mgbanwe dị ọnụ ala karịa nke Android Wear abụọ. Ngwa abụọ ahụ gụnyere Snapdragon Wear 2100, mgbawa akara maka ụdị wearables na nke na -ekwe nkwa arụmọrụ ike ka mma yana arụmọrụ ka mma. Ekwesịrị ịkọwa ya na anyị anaghị eche ihu na teknụzụ mgbawa a na SD400 dị ka nke kacha mma ugbu a.
Ị nweghị ike ịghọta ihe abụọ a na -eyi ma ọ bụrụ na ha anaghị eburu mmiri na uzuzu, na IP67 maka Style na IP68 maka egwuregwu. Nke ikpeazụ bụ otu n'ime elekere ndị kacha sie ike, ebe Style ahụ mara mma karịa, n'agbanyeghị na ọ na -echefu banyere ntinye nke ihe mmetụta obi. N'ụzọ ezi uche dị ebe a, ị nwere ike ịhụ ọdịiche na -ahụ anya na nke a na -ahụ anya n'etiti ha abụọ.
Ụdị egwuregwu na-eji redio niile dị mkpa maka ihe Android Wear 2.0 chọrọ: Bluetooth, Wi-Fi, NFC na LTE. Style bụ otu na -enweghị NFC, yabụ na ị gaghị enwe ike irite uru na Android Pay, dịka anyị siri mata ụnyaahụ na mfu dị ụtọ na -egosi ka esi akwụ ụgwọ na -eyi Wearble 2.0.
Na akụkụ imewe ha nwere okpueze ndị nwere ike ịtụgharị ka onye ọrụ wee nwee ike ịpịgharịa na ndepụta, nke na -agbaso omume nke Samsung Gear S na Apple Watch nyere.
Ọnụ ahịa ndị ahụ $ 350 maka Watch Sport na $ 250 maka Style Watch. Ha abụọ nwere batrị ga -eme ka ụbọchị ahụ zuo oke, agbanyeghị na mgbakwunye redio nke Watch Sport ga -enweta oriri batrị ka ukwuu.
Ha abụọ dịịrị ya Febụwarị 10 na United States site na Ụlọ Ahịa Google. Maka mba ndị ọzọ, izu ndị na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG mara ọkwa Watch Sport na Watch Style na gam akporo Wear 2.0
Mee ngọngọ nke ekwentị mkpanaka gị na ngwa a